Kaliya UK ayaa xallin karta ciladda Brexit, ayuu yidhi EU - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Kaliya UK waxay xallin kartaa murugada Brexit, ayuu yidhi Midowga Yurub
Kaliya UK waxay xallin kartaa murugada Brexit, ayuu yidhi Midowga Yurub
Legend of warbaahinta Theresa May iyo Jeremy Corbyn Kala hadal xildhibaanada ka dib markii Heshiiska Brexit laga Reebay
Khatarta ah "murugsan" Brexit marnaba ma sarrayn, madaxa guud ee EU-da ayaa yiri kadib markii labaad oo diidmo ay sameeyeen heshiiska MEP ee Theresa May.
Michel Barnier ayaa sheegay in Midowga Yurub "aan sii socon karin" isagoo isku dayaya in uu ku qanciyo Xubnahan si uu u taageeri karo xaaladaha bixitaanka la isku raacay iyo UK waa in ay jebiso jaahwareerka. .
Waxa uu ka walaacsanaa hadafka ah in la kordhiyo wada xaajoodyada ka baxsan 29 Maarso.
Xubnahan ayaa ka codeyn doona 19 GMT in ay ka hortagaan UK inay ka tagaan Midowga Yurub iyada oo aan heshiis la gaadhin bishan.
Codka Arbacada oo kaliya ayaa ka hadlaya marxaladda 29 bisha March oo aan ka hadlin suurtogalnimada in uu ka baxo heshiis aan ka dambeyn sanadkaan, hadii Baarlamaanka uu ugu dambeyn awoodi waayay in uu isku afgarto.
codaynta, ayay xukuumaddu ku dhawaaqday inta badan soo dejinta UK ma noqon doonin waajibaad kastam ah marka ay dhacdo Brexit iyada oo aan heshiis la gaarin.
Iyadoo ay xukuumaddu ka fekereyso in ay u wareegto 149 heshiiskii Maajo, Barnier waxa uu sheegay in ay ahayd waqtigii UK ay qaadan lahayd "mas'uuliyadda" ficiladeeda.
"Guriga Commons ayaa mar kale ku dhawaaqay waxa aan rabin," ayuu u sheegay Baarlamaanka Yurub. "Hadafkani waxa weeye kaliya lagu xallin karaa UK.
"Khatarta ah in aan heshiis la gaarin marnaba ka sareyn. Waa khatarta ah in laga baxo ... hab haboon. "
Midowga Yurub, wuxuu soo jeediyay, in uu tagay "intii suuragal ah" si uu uga hadlo dareenka MEP ee ku saabsan heshiiska, gaar ahaan dib u soo celinta siyaasadda caymiska ee loogu talagalay dhamme xadka adag ee jasiiradda Ireland.
"Haddii UK ay wali rabto inay ka baxdo Midowga Yurub si haboon, heshiiskani wuxuu joogayaa oo uu ahaan doonaa heshiiska kaliya ee suurtogalka ah," ayuu yiri.
Maxay yihiin codadka xildhibaannada dambe?
Xildhibaanada ayaa u codeeyn doona dhaqdhaqaaqa xukuumadda ee ah "Commons" in uu diido in uu ka tago Midowga Yurub iyada oo aan la siin heshiiskii kala noqoshada iyo qaabka xiriirka mustaqbalka ee 29 Maarso ".
Maajo, oo hadda hogaamiya golaha wasiirrada, ayaa sheegay in cod bixin lacag la'aan ah la siin doono Xildhibaanada Baarlamaanka.
Fadlan cusbooneysii galkaaga si aad u aragto isdhexgalka
Tani waxay ka dhigan tahay in wasiirrada iyo xildhibaannadu ay maskaxdooda ka dhigi karaan halkii ay raaci lahaayeen amarrada hoggaamiyayaasha xisbiyada - ficil aan caadi aheyn oo lagu codeeyo siyaasad weyn.
Doodda ku saabsan heshiiska la'aanta ayaa bilaabmi doonta ka dib markii dib loo cusbooneysiiyo dhaqaalaha ra'iisal wasaaraha iyo xukuumadda Chancellor Philip Hammond.
Ka tagista Midowga Yurub ee 16 ayaa weli ah booska joogtada ah ee Boqortooyada Midawga ee Sharciga, haddii aan la kordhin wadahadalka.
Haddii ay ka baxaan heshiis aan la diidin, Xubnahan ayaa u codeeyn doona khamiista iyagoo dib u dhigtay Brexit iyagoo sii waday maqaalka 50, oo ah nidaam sharci ah oo ka tirtira UK UK.
Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu u baahan yahay "xaqsoor macquul ah" ka hor inta aan la aqbalin kordhinta. Habka noocan oo kale ah waa in uu ansaxiyo dhammaan wadamada xubnaha ka ah.
Maxaa dhacay xalay?
Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu yeeray xildhibaanada daqiiqadihii ugu danbeeyay si uu u taageero heshiiskiisa kadib markii ay heleen qaanuun sharci ah oo taageeraya taageerada Irish ee wadahadaladii habeenkii xalay ka dhacay magaalada Strasbourg ee Midowga Yurub
Laakiin inkastoo ay ku guuleysatey in ay qanciso ilaa 40 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaannada si ay u baddalaan maskaxdeeda, haddana kuma filna inay jabiso guuldaradii taariikhiga ahaa ee codadkii 230 ee ay ku dhacday heshiiskii bishii Janaayo.
Isagoo hadlaya ka dib guuldaradii, waxay sheegtay in xildhibaanadu ay go'aaminayaan in ay rabaan in ay dib u dhigaan Brexit, qabtaan afti kale ama "doonayaan inay ka baxaan heshiis, laakiin aan ku jirin heshiiskan".
Waxay u sheegi doontaa wasiirrada. haddii ay codayn doonto heshiis haddii ay furto doodda Arbacada
Ururrada ayaa sheegay in heshiiska ra'iisal wasaaraha ee Brexit uu hadda yahay "dhimasho", iyada oo muwaadiniinta Brexiteers iyo Remainers ay sidoo kale ku baaqeen in si faahfaahsan dib loogu eego hababka.
Tifaftiraha BBC-da Laura Kuenssberg ayaa sheegay in qaar ka mid ah wasiirrada ay u maleynayaan inay taasi sii wadi karto, iyada oo xulashooyinka kale ee la go'aamin doono taageerada la'aanta baarlamaanka.
Ururka dhaqdhaqaaqa shaqaaluhu wuxuu rabaa "suuq aan suuqa ahayn" in laga saaro miiska "waxaana laga yaabaa in uu taageerayo wax-ka-beddelid - qalab sharci-dejin ah - oo ay soo bandhigeen xildhibaan Jack Dromey iyo Caroline Spelman oo ka baxsan bixinta Boqortooyada Ingiriiska
Xoghayaha Guud ee Arrimaha Dibadda Rebecca Long-Bailey ayaa BBC u sheegay in Baarlamanku uu "qorsheyn doono" inta badan had iyo jeer haddii aysan xukuumaddu xakamayn munaasabadaha.
Ka fikir inaad siiso xildhibaannada codbixin bilaash ah dhammaan fursadaha suurtagalka ah ee xiriirka Ingiriisiga la leh Midowga Yurub, oo ay ku jiraan qorshayaasha midowga ee ururada macaamilka.
Waxa aan caddeyn waa sida Ra'iisul Wasaaruhu doonayo inuu ka soo baxo xaaladdan. dalool siyaasadeed oo xun.
Qaar ka mid ah jalayaashiisa ku hareereysan Golaha Wasiirrada waxay qabaan in tani ay muujinayso in ay tahay in ay la xaajooto heshiis ku dhow heshiiska Midowga Yurub.
Qaar waxay u maleynayaan in wakhtigu uu yimaado si uu u aado qolka maqaarka oo aan dhinacna ka tegin. heshiis caalami ah, laakiin wuxuu u guuraa si uu ugu diyaar garoobo inta ugu macquulsan oo dhakhso ah.
Wasiirada kale waxay si daacadnimo ah u aaminsan yihiin in wali socdo laba todobaad oo ka hartay iyo in shirwaynaha EU-da la qaban doono isbuuca soo socda, laakiin wali waxaa jira wakhti ay isku dayaan in ay gaaraan heshiis.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso Laura
Qorshayaasha kale ee laga doodi lahaa Arbacada, waxaa la filayaa in Boqortooyada Midowday ay qorsheyneyso inay ka baxdo heshiis aan rasmi ahayn balse leh tiro tallaabooyin ilaalin ah si loo yareeyo khalkhalka dhaqaale.
Qorshaha, oo loo yaqaano Malthouse isbahaysi, ayaa waxaa taageeray xubno ka tirsan kooxda baaritaanka xildhibaannada ee Brexiteer Conservative, iyo sidoo kale DUP iyo wasiiradii nasashada hore ee sida Nicky Morgan iyo Damian Green.
Waxa uu arki lahaa muranka gadaashiisa ee lagu beddelay qorshe kale, heshiis cusub oo ku-meel-gaar ah iyo qorshe dhaqaale oo isdaba-joog ah ilaa iyo dhammaadka 2021.
Hantida taageerada Corbyn: Qorshaha PM ee Brexit waa uu dhintay
Inkasta oo wasiirrada Brexiteer ay codsadeen cod bixin lacag la'aan ah oo ku saabsan hindise-codsiga, Xildhibaan Steve Baker ayaa BBC-da u sheegay in qorshaha - oo dib loo dhigayo Brexit ilaa 22 May - uu ahaa "si macquul macquul ah".
Laakiin wasiirkii hore ee konserfatifka Nick Boles ayaa sheegay in uu noqon doono heshiis aan la isku raacsaneyn oo Midowga Yurub uusan aqbali doonin.
Muxuu Ingiriisku ku samayn lahaa xaalad aan heshiis lahayn?
Xukuumaddu waxay si faahfaahsan u caddaynaysaa waxa ay sameyn lahayd si ay u soo jiito ganacsiga iyo ilaalinta ganacsiyada marka ay dhacdo in UK ay ka baxdo EU-da iyada oo aan heshiis la gaarin.
Marka la eego nidaam ku meel gaar ah, 87% ee soo dejinta qiimaha waxay u qalantaa helitaanka "khariidad eber", oo ka dhan ah 80% hadda. Sicirada waa la ilaalin doonaa si loo ilaaliyo warshadaha qaarkood, oo ay ku jiraan beeraha.
Dawladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in aysan abuuri doonin wax xakameyn ah ama xakameyn cusub, ama u baahan cadeyn canshuur ah oo alaabada ka gudbeysa xuduudka Irish ee meelaha dibedda ah. Waqooyiga Ayrland haddii UK ay ka tagto Midowga Yurub iyada oo aan heshiis la gaarin.
Go'aanka ah in laga tago dhammaan koontaroolada si looga fogaado khilaafka xuduudaha UK ee xuduudaha EU-da waxa uu noqon doonaa mid ku-meel-gaar ah, halka xalalka muddada dheer la xalliyo.
Wareersan? Noo sheeg waxaad rabto inaad ka ogaato Brexit iyo waxa dhici doona xiga.
Isticmaal foomkan si aad u weydiiso su'aashaada:
Haddii aad boggan ku aqriso barnaamijka BBC News, waxaad u baahan tahay inaad tagto qaybta mobile-ka ee bogga BBC si aad u weydiiso su'aashaada mawduucan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.bbc.com/news/uk-politics-47548498
Toban sano oo xabsi ah oo lagu afduubay
VIDEO ee QIIMEYNTA DHAGEYSIGA CENTRAL; Maxaa sharaxaad ka bixinaya dhacdadiisii ​​oo intaa ka sii badan?